Ukuze ukhethe imodeli efanelekayo ngesinye isikhathi kunzima ngempela. Futhi kwenzeka ngezinye izikhathi, ukuze uye wathenga izicathulo amahle ibhokisi nabo futhi ithala. Futhi zonke ngoba kuyizinto kuphatheke kabuhlungu kakhulu. Ngakho, ake usho amaphuzu ayinhloko kufanele sinake lapho ukhetha izingubo ezintsha.
Ukukhetha pair entsha, thina, okokuqala kunakho konke, cabanga, ukuthi sidlala kahle kuzo, futhi ngenxa yalokho, zinakekele, impilo yakho. Futhi kulesi simo, hhayi ubuhle kanye elikhangayo models entsha kukhona kwasekuqaleni, nevikeleko lethu. Ukuthenga izicathulo ne High Heels kakhulu, kufanele ucabange ngakho, ukuthi sidlala kahle ukuba nihambe ngazo. Ngakho, izicathulo kufanele sihambisane zonke izindinganiso zenhlanzeko.
Usayizi akhethiwe izimpahla ezintsha kungenasidingo oluthinta ngqo ukuphepha kwakho nenduduzo. Uma isihlangu ayesezibhebheni ubukhulu ezincane, usongela ukuvela unyawo sengozini calluses. Ngaphezu kwalokho, kukhona nabesifazane ababemkhalela ukuthenga imodeli ungakhululekile ahlupheke kwegazi, kanye nezinzipho ingrown. Futhi akunakwenzeka ukuthenga okunjalo kuyoletha umnikazi walo injabulo ekhethekile.
Ochwepheshe abaningi ukweluleka ukuthenga izicathulo ezintsha ntambama, ngoba emini umlenze siyakhukhumala kancane futhi ukwanda ngobukhulu. Futhi uzama izicathulo esitolo, kufanele nakanjani ukuhamba kancane kuwo, ukuba aqonde ukuthi akakubangeli wena iyiphi ubuhlungu lapho ushayela.
Kukhona phakathi kwethu futhi abalandeli ukugqoka imodeli okuxekethile. Abantu abanjalo babe Gait kamuva ongagxilile, futhi, njengoba umthetho, lokhu kuholela ukuwa njalo yokulimala kabi.
Uma une unyawo esincane, bese ukhetha imodeli elifanele izicathulo zabesifazane kunzima kakhulu. Ezimweni ezinjalo, i insole ezengeziwe, okuyinto angathengwa esitolo efanayo noma wenze ngokwakho aphume amakhadibhodi izicubu zomzimba ezithambile.
Linganisa unyawo ku izicathulo angene ezihlukahlukene ezahlukene. Vula izicathulo alengayo ezizongolozele ngezinyawo, ngakho unyawo njalo ilele izicathulo zakho. Ngakolunye uhlangothi, lacing ivumela ukulungisa umlenze njengoba ukhululekile. Ngokuthenga onobuhle ebusika, kuyafaneleka ukukhumbula ukuthi umlenze kufanele kube eduze kakhulu izicathulo ezinjalo. A wekhasi encane uzwane kufanele kube kulokhu.
Isithende ukuphakama nalo libalulekile. Ngiyavuma ukuthi izicathulo nge ukuphakama isithende 12 cm kokugqokwa zonke akunakwenzeka ukuba uvumelane. Wonke umuntu uyazi ukuthi uma isithende lungaphezu 5 cm, it okubeka impilo yowesifazane, kamuva uzohlupheka iqolo futhi izifo semithambo. Hhayi intombi ende kakhulu, kulesi simo, singakwazi ukukhuthaza uthenge izicathulo emsamo, kodwa uma nje ngeke kube nzima izinyawo zakho.
Indaba ilungele eliphezulu izingubo ezintsha - lesikhumba. Foot khulula "kuheleza" futhi akusho ujuluke. Smooth lesikhumba patent, ngeshwa, ayinayo lezi zimfanelo, ngaphandle isikhathi eside futhi is hhayi Kunconywa ukuba uzigqoka.
Ukukhetha pair yakhe eyigugu, khumbula ukuthi imfashini akuyona kwamalungelo wobuntu, kanye nezempilo! Inhlanhla okukhethayo.
Utamatisi pickled izimbiza - Yummy, okungabanga bikho kuso umuntu kungaba senqabe!